Akụrụngwa fatịlaịza, Nweta Production Fatịlaịza - YiZheng
Anyị Nye ngụkọta usoro ngwọta
Usoro ahịhịa fatịlaịza na-arụ ọrụ
ANY PR na-enye akụrụngwa dị elu
Zhengzhou Yizheng Arọ Machinery Equipment Co., Ltd. emi odude ke edem usoputịn ogige nke Zhengzhou, Henan n'ógbè, specializes na nnyocha na mmepe nke ugbo gburugburu ebe obibi na-echebe technology, nnyocha na mmepe na mmepụta nke n'efu imegharị ihe maka iji ngwá, BB fatịlaịza zuru ezu tent nke akụrụngwa, organic fatịlaịza ngwá, organic fatịlaịza mmepụta akara akụrụngwa nnyocha na mmepe na mmepụta. Anyị nwere ikike nyocha na ikike mmepe na ike nrụpụta. Iji nye ndị ahịa na usoro imewe, organic fatịlaịza akụrụngwa n'ichepụta, echichi, ule, na-akwado a otu nkwụsị keukwu ọrụ.
Na-enye Osisi Fatịlaịza Dum
Jiri Fatịlaịza Kemịkal Kwesịrị Ekwesị
A na-emepụta ọgwụ ndị na-emepụta ọgwụ ndị na-emepụta sịntetik site na ihe ndị na-emepụta ihe, bụ ihe na-enye ihe ndị na-edozi ahụ maka osisi na usoro anụ ahụ ma ọ bụ kemịkal. Ihe na-edozi ahụ nke nri fatịlaịza Chemical fatịlaịza bara ọgaranya na nri atọ dị mkpa dị mkpa maka pl ...
Nchịkwa Ogo nke Fatịlaịza Organic
Nchịkwa ọnọdụ nke mmepụta fatịlaịza organic, na omume, bụ mmekọrịta nke anụ ahụ na ihe ndị dị ndụ na usoro ịkpụzi compost. N'otu aka, ọnọdụ nchịkwa bụ mmekọrịta na ịhazi. N'aka nke ozo, ikuku di iche iche agwakọtara onwe ha, n'ihi div ...
Nweghachi nke ihe mkpofu ero
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmepe nke teknụzụ ịkụ mkpụrụ nke ero, oriri na-aga n'ihu nke ịkọ mpaghara na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ịkọ ihe dị iche iche, ero aghọọla ihe ọkụkụ dị mkpa na mmepụta ọrụ ugbo. N'ebe a na-eme ero ero, ọtụtụ ihe mkpofu bụ ihe nketa ...
Etu esi choputa igwe ihicha fatịlaịza
Tupu ị na-ahọrọ igwe ihicha fatịlaịza, ịkwesịrị ịme nyocha nke mbido nke mkpa ihicha gị: Akụrụngwa maka ahụ: Gịnị bụ njirimara anụ ahụ mgbe ha mmiri ma ọ bụ nkụ? Kedu ihe bụ nkesa granularity? Na-egbu egbu, na-enwu ọkụ, na-emebi ma ọ bụ abrasive? Usoro chọrọ ...
Mgbe fatịlaịza a na-eme n'ụlọ, ọ bụ ihe dị mkpa iji mebie ahịhịa. Composting bụ ụzọ dị irè na nke akụ na ụba iji kpochapụ ihe mkpofu anụ ụlọ E nwere ụdị ikpo atọ dị iche iche: ogologo, ọkara ọkara, na olulu Stradị Kwụ Ọtọ Kwesịrị ekwesị maka oke okpomọkụ, mmiri ozuzo, oke iru mmiri, mmiri dị elu ...